आईपीओ कसरी भर्ने र के फाइदा हुन्छ ? - IAUA
ramkrishna January 27, 2021	आईपीओ कसरी भर्ने र के फाइदा हुन्छ ?
पुँजी बजारलाई अर्थतन्त्रको ऐना मानिन्छ र बजारको वृद्धिदरका आधारमा अर्थतन्त्रको अवस्था विश्लेषण गरिन्छ। IPO को पुरा अर्थ Initial public offering हो। धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत भए पछी आईपीओ जारी गर्नुभन्दा केहि समयअघि सम्बन्धित कम्पनीले सेयर जारी हुने मिति, निबेदन दिन मिल्ने न्युनतम र अधिक्तम सेयर कित्ता, कम्पनीको हालको स्थिति र भविष्यको योजना समेत उल्लेख गरेको आह्वानपत्र निष्कासन गर्छ। आह्वानपत्र अध्ययन गरेर प्रतिसेयर आम्दानी, इक्विटिमा प्रतिफल, लाभांश, संस्थागत सुशासन, साधारणसभा, रेटिङ आदिलाई आधार बनाएर सो कम्पनीमा लगानी गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ। आह्वानपत्रमा उल्लेख भएको सेयर विक्री प्रबन्धक, तोकिएका सङ्कलन केन्द्रबाट सेयरमा लगानी गर्न फारम पाइन्छ वा अन्लाईनबाट पनि भर्न सक्नुहुन्छ ।
पहिलो पल्ट आईपीओ भर्दै हुनुहुन्छ भने यो प्रकृया पुर्‍याउनु होला-
१. बैंक खाता – आईपीओमा आवेदन दिन तपाईलाई सी-आस्बामा दर्ता भएको बैंकको बैंक खाता चाहिन्छ।
२. डिम्याट खाता – डिम्याट खाता भनेको तपाईको सेयर राख्ने खाता हो। सजिलोको लागि यसरी बुज्नुस्, पैसा राख्ने खाता बैंक खाता अनि सेयर राख्ने खाता डिम्याट खाता हो।
कहाँ खोल्ने डिम्याट खाता ?
डिम्याट खाता तपाईले ब्रोकरबाट अथवा बैंकबाट खोल्न सक्नु र त्यही ठाउँबाट सीडीएसएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी) ले उपलब्ध गराएको मेरोसेयरको (Meroshare) युजरनेम र पासवड (Meroshare username/password) पनि लिनु होला ।
किन लिने मेरोसेयरको युजरनेम र पासवड ?
तपाईं सँग मेरोसेयरको युजरनेम र पासवड (Meroshare username/password) भयो भने तपाईले घरमै बसेर वा इन्टरनेटको पहुँच भएको जुनसुकै ठाउँमा बसेर आईपीओको लागि आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। यो प्रणालीले गर्दा ब्यस्त मनिसहरु तथा गृहिणीहरुलाई कारोबार गर्न धेरै सजिलो हुन्छ। मेरोसेयर लिनु भएन भने आईपीओको लागि आवेदन दिन पुरनो तरिकाबाट बैंक खाता भएको शाखामा गएर फर्म भरेर, लाईन बसेर आईपीओमा आवेदन दिनु पर्नेहुन्छ।
३. सीआरएन नम्बर (CRN number) – डिम्याट खाता खोलीसकेपछि आफ्नो बैंक खाता भएको ठाउँमा गएर सीआरएन नम्बर (CRN number) लिनु पर्छ ।
माथिको सबै प्रकृया पुरा भएपछी तपाईंले आईपीओ भर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईलाई सेयर परे पछी परे जती रकम तपाईको बैंक खाताबाट कट्छ र तपाईलाई त्यो रकम बराबरको सेयर तपाईको डिम्याट खातामा आउछ। आफ्नो खातामा रहेको सेयर तपाईंले अन्लाईनबाट पनि हेर्न सक्नु हुन्छ । अब आईपीओमा परेको सेयर बेच्न चाहनु हुन्छ भने ब्रोकेर कार्यालयमा गएर बजार भाउ अनुसार सजिलै बेच्न सक्नुहुन्छ ।
आईपीओबाट के फाइदा हुन्छ ?
सेयरमा लगानी गर्दा तब फाइद हुन्छ जब कम्पनीले नगद लाभांश वा सेयर लाभांश बितरण गर्दछ अथवा सेयरको मूल्य बढेमा पनि फाइदा हुन्छ। यदी सही कम्पनीमा लगानी गर्नु भएको छ भने वार्षिक रुपमा बैंकबाट पाउने ब्याज भन्दा धेरै प्रतिफल पाउन सक्नुहुन्छ ।
Previous Previous post: फेसबुक अकाउन्ट सुरक्षित राख्न यी तरिका अपनाउनुहोस्
Next Next post: यी ७ चिज घरमा राखिएको छ भने वास्तुदोष र नराम्राे संकट पर्न सक्छ